नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा एयरबस ए ३३०–२०० खरिदमा अनियमितताको आरोपका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनेछ । शनिबार १२ बजे काठमाडौंको बसन्तपुर डवलीमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने भएको छ । हाइफ्लाइ–एक्स आइरल्याण्ड लिमिटेडबाट खरिद गरिएको जहाजमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ ।
वाइडबडी भ्रष्टाचार छानबिनका लागि नागरिक आयोगले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । अभियानका अभियन्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले उक्त सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा आम–नागरिक, विषयका विज्ञ र सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई सहभागी भइदिन आग्रह गरे । अभियानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त वाइडबडी भ्रष्टाचार विषयमा जानकारी राख्ने आम नागरिकहरूले आफूलाई जानकारी भएको विषय र धारणा राखिदिन हुन अनुरोध गरेका छौं ।” यस्तै, अभियानले विषयविज्ञले भ्रष्टाचारको विवरणसहित सार्वजनिक गरिदिन र सर्वसाधरणलाई सुचित गरिदिनुको साथै आम–पत्रकारले पनि सो भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा लेखिएका दस्तावेज, लेखहरूलाई समेत लिई उक्त सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागी भई आ–आफ्नो धारणा राखिदिनको लागि आव्हान गरेको छ ।
कार्यक्रममा वाइडबडी भ्रष्टाचार छानबिनका लागि नागरिक आयोगका संयोजक सुकदेव भट्टराईले वाइडबडी भ्रष्टाचारबारे संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने शंका व्यक्त गरे । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई यो काण्डमा मन्त्री संलग्न छैनन् भन्ने अधिकार छैन ।” उनले सबै राजनीतिज्ञहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भ्रष्टाचारले मुलुकलाई समाप्त पार्न लागेको खतरा औंल्याए । यस्तै, कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठले वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्डमा आफूहरूले सत्य, तथ्य बाहिर ल्याएरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, “हामीले धेरै अनुशन्धान गरिसकेका छौं । सबैखाले दस्तावेजहरूको अध्ययन गरेका छौं । विशेज्ञहरूको पनि राय लिएका छौं । चाँडै नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौं ।” गहन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन लागेको उनको दाबी छ ।
नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वाइडबडी भ्रष्टाचारबारे जनतालाई सत्य कुरा थाहा दिलाउने बताए । कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य सचिव रोशा श्रेष्ठले वाइडबडी भ्रष्टाचारबारे चौतर्फी रुपमा आवाज उठाउन आग्रह गरिन् ।